Lahatsary : Ireo Famakiamboky Entina Mandehandeha Misy Manerantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Janoary 2018 12:50 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Español, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, македонски, عربي, Aymara, English
Ireo boky avy amin'ny br1dotcom
Amin'ny ankamaroan'ny rafitry ny famakiamboky, lasa tena ilaina ny famakiamboky mandehandeha, mitondra boky ho an'ireo tsy afaka miditra any amin'ny trano famakiamboky. Fa na izany aza, any amin'ny toerana maro, noho ny faharatsian'ny làlana na tsy fahampian'ny fitaovana dia tsy azo atao intsony ilay rafitra mahazatra, fitondràna izany amin'ny fiarabe fitaterana na kamiao. Noho izany dia nipoitra ho toy ny safidy mety hitondràna boky ho an'ireny vondrom-piarahamonina ireny ny famakiamboky entina amin'ny saretin'omby, ny famakiamboky entin'ny ampondra ary ny famakiamboky entin'ny môtô.
Azontsika topazana maso ao amin'ny bilaogy Bilingual Librarian ireo karazana famakiamboky entina mandehandeha ireo. Voalohany, ‘ndao ho resahana ny momba ny famakiamboky entin'ny ampondra. Ny ohatra malaza indrindra amin'izany dia ny “biblioburro”-n'i Kolombia, tantànan'ilay mpampianatra amin'ny ambaratonga voalohany, Luis Soriano. Afatrany eo ambony ampondrany ny entana, miakatra eo amboniny izy, mitàna latabatra fitondra mitsangatsangana azo aforitra miaraka amin'ny marika hoe Biblioburro ary mandeha mandritra ny 4 ora manatitra boky ho an'ireo ankizy izay tsy mba afaka manana izany. Mamaky tantara amin'izy ireo izy, manampy azy amin'ny asa enti-mody, ary manome azy ireo ny fahafahana mankafy boky izay tsy mba ananany any an-tranony. Araka ny fanazavàny, amin'ny alàlan'ny boky no mety ahitan'ireo ankizy ireo toerana hafa, olona hafa, sy ahafahany mamantatra ny zony, ny zavatra tokony ho ataony sy ny andraikiny eo amin'ny fiarahamonina, ary amin'ny fanànana ireo fahalalàna ireo dia afaka manao tsia ny herisetra sy ny ady izy ireo.
Nisy fiantaraikany lehibe tamin'ny fiainan'i Luis io lahatsary io : rehefa fanta-bahoaka ilay lahatsary dia nitobaka ny fanomezana, ary amin'izao fotoana izao dia efa vita ilay trano famakiamboky izay teo am-panamboarana : talantalana, latabatra vitsivitsy no hita ao ary amin'izao fotoana izao, dia ankizy 250 an'ny La Gloria no afaka mitsidika ilay trano famakiam-boky ao anatin'ny herinandro. Mandritra ny faran'ny herinandro kosa, mbola mitaingina ny ampondrany ihany i Luis, mitondra ny famakiamboky ho an'ireo mbola lavitra. Lahatsary fisaorana ity manaraka ity, izay isaoran'Atoa Soriano ny rehetra nanampy tamin'ny fanatontosana ny nofinofiny :
Toa fahombiazana lehibe ilay famakiamboky entin'ny ampondra. Fa any amin'ny faritra hafa any Kolombia, ireo indiana Arhuaco any amin'ny faritry ny tandàvan-tendrombohitra Santa Marta dia mahazo tombony avy amin'ny rafitra tahaka izany. Tantarain'ny bilaogy biblioburro amin'ny alàlan'ny sary ny tantara. Any amin'ny manodidina an'i Venezoelà, ampondra vavy’ ( safiotranà ampondra sy soavaly vavy) ‘ no asolo ny ampondra, ary izany no ampiasaina, mihevitra ny hanampy fandefasana sarimihetsika sy fidirana amin'ny aterineto ry zareo, tsy hamenoana ny tahan'ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra ihany fa ny tsy fahaizana mikirakira ihany koa. Any Etiopia, araka ny asehon'ity lahatsary manaraka ity, dia niverina any Etiopia ilay teratany Etiopiana-Amerikana Yohannes Gebregiorgis mba hametraka ny famakiamboky mandehandeha entin'ny ampondra. Ny fanamby lehibe dia ny hahita boky amin'ny iray amin'ireo fiteny mahazatra any Etiopia. Ny vahaolany ? Nosoratany tamin'ny karazana fiteny 3 ny tantara iray momba ny fahazazany , ary miasa amin'ny famoahana boky tantara bebe kokoa izy .
Miditra an-daharana ao anatin'ilay dingana fanabeazana miaraka amin'ny ampondra sy ny ‘ampondra vavy’ ny rameva. Mitondra boky ho any amin'ireo sekoly any amin'ny faritra ny Famakiamboky entin'ny rameva any Kenyà mba hahafahan'ireo ankizy mianatra mitia mamaky boky, sady manome boky ho an'ireo vondrom-piarahamonin'ny mpifindra monina . Any amin'ny toerana ahitàna ireo olona mifindra toerana manaraka ny toetrandro no tsy maintsy hikisahan'ny famakiamboky miaraka aminy. Any amin'ny firenena mahantra, ny boky dia zavatsoa sarobidy ka vitsy no mety manana azy. Mitondra boky tantara sy anganongano na boky famaky any an-tsekoly ireo famakiamboky entin'ny rameva ireo, afaka maka boky entina mody mandritra ny tapa-bolana ireo mpikambana, ary aorian'izay dia miverina indray ny famakiamboky rameva ka afaka manavao ny bokiny ry zareo na maka boky iray vaovao. Ity lahatsary manaraka ity dia mitantara zaza iray mijery ny fahatongavan'ilay famakiamboky entin'ny rameva, maka boky ary avy eo mampianatra an-drainy ny isa avy amin'ny iray amin'ireo boky entiny mody ireo :
Nihena ny isan'ny famakiamboky entina amin'ny fiara any Però, ka noho izany dia teraka ny famakiamboky entina amin'ny môtô. Ao anatin'ny fandraisan'ny Futura Project anjara ihany koa ny fitondràn'ny famakiamboky iombonana Obraje boky ho an'ireo ankizy any amin'ny vondrom-piarahamonina hafa, izay ao anatin'ireo hetsika ara-kolotsaina, haisoratra izay andrandrain-dry zareo ihany koa :